पराजुलीमय कान्तिपुर : बाइलाइन फरक, समाचार हुबहु ! – Media Kurakani
March 11th, 2018 Media Kurakani Media News, Media Watch
‘कान्तिपुर दैनिक’ र ‘नेपाल साप्ताहिक’ दुबै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपकै पत्रिका भएकोले यी दुईमा उस्तै सामग्री छापिनु अस्वभाविक होइन। तर आआफ्ना सम्पादकीय टिम, पाठक र स्वाद भएका यी दुई पत्रिकामा आइतबार फरक फरक बाइलाइनमा छापिएका दुई समाचारमा उल्लेख गरेका ‘तथ्य’ र विषय भने हुबहु छन्।
कान्तिपुरविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार (२०७४ फागुन २७ गते) सर्वोच्च अदालतको वृहद् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई थियो।
आइतबारै प्रकाशित नेपाल साप्ताहिक र कान्तिपुर दैनिकमा फरक फरक बाइलानमा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीबारे दुईवटा समाचार सामग्री प्रकाशित भएका छन्। पछिल्लो समय हात धोएर प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका पछि लागेको कान्तिपुर आज त झन् पूरै पराजुलीमय नै थियो।
कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठमा ‘सर्वोच्चलाई प्रतिशोधमा प्रयोग गर्दै पराजुली’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।
पृष्ठ ३ मा ‘मिडिया नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत’ शीर्षकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र ‘प्रेसलाई अंकुश लगाए देशै रहन्न’ शीर्षकमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाको भनाईलाई समाचार बनाइएको छ।
कान्तिपुरले विचार पृष्ठ पनि आज यही विषयमा खर्चेको छ। पृष्ठ ६ मा डा. गोविन्द केसी (जो आफै प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग्दा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन्) र केसीका सहयोगी भनेर नेपालका मिडियामा उद्धृत हुने जीवन क्षेत्रीको ‘न्याय जोगाउने नागरिक दायित्व‘ शीर्षकमा संयुक्त लेख छापिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको ‘न्यायाधीशको विवादबाट न्यायपालिका जोगाऔं‘ शीर्षकको लेख पनि कान्तिपुरमा छापिएको छ।
पृष्ठ ७ मा ‘आलोचनाप्रति अदालत संयमित हुनुपर्छ’ शीर्षकमा सरकारका महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलको अन्तर्वार्ता छापिएको छ।
अब मूल विषयमा लागौँ।
हरेक आइतबार प्रकाशित हुने यसपटकको नेपाल म्यागेजिनले आवरणमै लेखेको थियो- स्वेच्छाचारी गोपाल पराजुली।
‘गोपाल पराजुली : पूर्वाग्रही, स्वेच्छाचारी’ शीर्षकमा मनबहादुर बस्नेतले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेको विशेष रिपोर्टलाई अनलाइनमा भने ‘आफ्ना गल्ती र स्वार्थ लुकाउन गोपाल पराजुलीले कसरी गरिराखेका छन् संस्थाको दुरुपयोग ?’ शीर्षकमा पोस्ट गरिएको छ।
नेपाल म्यागेजिनको यो विशेष रिपोर्ट र आज कान्तिपुरमा रामबहादुर रावलको बाइलाइनमा प्रकाशित‘सर्वोच्चलाई प्रतिशोधमा प्रयोग गर्दै पराजुली’शीर्षकको समाचार लगभग हुबहु छन्।
दुबै समाचार २०७४ वैशाख १४ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकको प्रसंगबाट सुरु भएका छन्।
कान्तिपुर र नेपाल म्यागेजिन दुबैका समाचारमा न्यायपरिषद्को उक्त बैठकमा तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति सम्बन्धी विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गरेको तर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उल्लेख छ। समाचारहरूमा गोपाल पराजुली र सुशीला कार्कीबीच उक्त बैठकको वादविवादलाई पनि उद्धृत गरिएको छ।
समाचारहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्ने र त्यसको निहीतार्थ बुझ्ने जिम्मा हामी पाठकहरूलाई नै छोड्छौँ।
अहिलेलाई दुबै समाचार कसरी सुरु भएका छन्, त्यो हेरौँ।
कान्तिपुरको समाचार भन्छ-
मेराबारे बाहिर सारै हल्ला भयो, एउटा निर्णय गरिदिनुपर्‍यो ।’ (गोपाल पराजुली)
कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘न्यायपरिषद् प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँ होइन । आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर ल्याउनू । अनि मात्र न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ ।’
बैठकमा चर्काचर्की भयो । त्यस क्रममा कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘तपाईंको किर्ते कामको अंग हामी (न्यायपरिषद्) किन बन्ने ?’ त्यो बैठकबाट पराजुलीले चाहेजस्तो निर्णय भएन ।
‘त्यसपछि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मेरा पालामा न्यायपरिषद् बैठक नै बस्न दिइएन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन् ।
(कान्तिपुर र नेपालका समाचार समग्रीमा पराजुली र कार्कीबीच न्यायपरिषद् बैठकमा भएको वादविवाद कार्कीले नै पत्रकारलाई दिएको पछिल्लो उद्धरणले प्रष्ट पार्छ, जहाँ उनले पटक पटक न्यायपरिषद् बैठक राख्न खोज्दा नदिइएको दावी गरेकी छन्।)
पराजुली र कार्कीको सम्वादबारे नेपाल म्यागेजिनले भने यसरी लेखेको छ-
१४ वैशाख ०७४
स्थान : नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को कार्यालय, कुपन्डोल, ललिपुर
उद्देश्य : न्यायपरिषद् बैठक
प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अनुनय शैलीमा आफूसँग जोडिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबारे ‘सहयोगी निर्णय’ गर्न मौखिक प्रस्ताव राखे ।
प्रस्तावको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्की अध्यक्ष सुशीला कार्कीले विनीत भावमै प्रतिवाद गरिन्, ‘न्यायपरिषद् प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँ होइन । आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर ल्याउनू । अनि मात्र न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ ।’ कार्कीको यस्तो शालीन तर अडानयुक्त जवाफपछि बैठकस्थलमै पराजुली र कार्कीबीच चर्काचर्की पर्‍यो । ‘तपाईंको कीर्ते कामको अंग हामी (न्यायपरिषद्) किन बन्ने ?’ कार्कीले पराजुलीलाई भनेकी थिइन् ।
दुबै समाचारको सुरुवातमात्र होइन, भित्रका अन्य ‘डिटेल्स’ पनि हुबहु छन्। प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई ‘माफियाका डन’ आरोप लगाएर उनको राजीनामा माग्दै आएका डा. गोविन्द केसीदेखि, पराजुलीले आफूलाई मार्ने धम्की दिएको आरोप लगाउँदै आएका अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, न्यायाधीश सुरेन्द्रसिंह बस्न्यातको जन्ममिति विवाददेखि पराजुलीको विवादसम्मका विषय दुबै समाचारमा दोहोरिएका छन्।
र, यी कुनै नयाँ कुरा होइनन्, बरु कान्तिपुरले हरेक समाचारमा दोहोर्‍याइरहने विषय हुन्।
पराजुलीले पटक पटक सर्वोच्चलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न खोजेको कान्तिपुर र नेपाल दुबैको जिकिर छ। नेपाल म्यागेजिनको समाचारमा ‘डिटेल्स’ बढी छ। कान्तिपुरको समाचार त नेपालको सामग्रीका अघि बेकार नै छ।
समाचारमा अरु के के विषय हुबहु छन् र के के फरक कुरा आएका छन्, पढ्ने र छुट्याउने जिम्मा हामी विज्ञ पाठकहरूलाई नै छोड्छौँ।
हाम्रो प्रश्न मात्र के हो भने- आखिर हुबहु समाचार छाप्नु छ भने किन फरक फरक सम्वाददाताको बाइलाइन ? अदालत र प्रधान न्यायाधीशसँग कान्तिपुर संस्थाकै साझा लडाइँको विषय भएर पो हो कि समाचार पनि साझा भएको ?
Tags Gopal Parajuli Kantipur Daily Kantipur Media Group Kantipur Publications Man Bahadur Basnet Nepal Weekly Ram Bahadur Rawal Supreme Court
अमेरिकी न्यायाधीशको महाभियोगबारे कान्तिपुरको फ्रन्टपेज समाचारमा गलत तथ्य »
« सर्वोच्च अदालतमा पनि दुर्घटना : चोलेन्द्र श्रीमानको ‘आदेश’ ले अवहेलना मुद्दामा नयाँ ट्‍विस्ट
चोलेन्द्र श्रीमानको बोलीमा कान्तिपुरको लोली : ‘प्रधान न्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भइसके’ – Me (#)
[…] पराजुलीमय कान्तिपुर : बाइलाइन फरक, समा… […]
गज्‍जब #Breaking : ‘पदमुक्त’ प्रधानन्यायाधीशद्वारा राष्‍ट्रपतिको सपथ – Media Kurakani (#)
LeaveaReply to यो मुद्दा गोपाल पराजुलीविरुद्ध मात्र हो ? कान्तिपुरको पूर्वाग्रही हेडलाइन – Media Kurakani Cancel reply